छोरेगाउँ माविको बार्षिकोत्सव, शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयमा राजनीति बन्द गर्नुपर्छ: नेपाली ! - ढोरपाटन पोष्ट
२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार १०:१८
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ स्थीत छोरेगाउँ माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो ३८ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस भव्यताका मनाएको छ । विद्यालयल विभिन्न आन्तरिक संगै बाह्य प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको हो ।
सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरु गत ९ गते देखि सुरु गरिएपनि औपचारिक उद्घाटन संगै समापन भने बुधबार गरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीले प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रमको विधिवत उद्धघाटन गर्नुभएको थियो । उद्धघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख नेपालीले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालयमा राजनीति बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कतिपय शिक्षकले विद्यालयमा अध्यापनरत रहेर पनि राजनैतिक दलको कमिटिमा बसेर राजनीति गर्दा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि हुन नसकेको नगर प्रमुख नेपालीको भनाई छ ।
सबै वर्ग समुदायका नाागरिकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वाताबरणको सृजनाका लागि शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेबार बन्न आग्रह गर्नुभयो । सामुदायिक विद्यालयको समस्या आफुले राम्रोसंग बुझेको भन्दै नगर प्रमुख नेपालीले त्यसको समाधानमा ढोरपाटन नगरपालिका विभिन्न नविन्तम कार्यक्रमहरु र योजनाका साथ अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो । यस्तै छोरेगाउँ माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११/१२ सञ्चालनका लागि ढोरपाटन नगरपालिकाले आवश्यक योजना निर्माण गर्ने नगर प्रमुख नेपालीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ढोरपाटन नगर कार्यपालिका सदस्य कमला छवि विक, ढोरपाटन उद्योग वाणिज्यसंघ बुर्तिबाङका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
गत २०७५ सालमा वार्षिकोत्वसकै अवसर पारेर छोरेगाउँ माध्यमिक विद्यालयका लागि नगर प्रमुख नेपालीले स्थापना गरिदिएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँको अक्षय कोषबाट प्राप्त व्याजको रकमले गरिव तथा जेहेन्दा विद्यार्थी छनौट गरी सम्मान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात समेत गरिएकोे छ । जस अन्तर्गत यसपटक १५ जना गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरिएको छ । कार्यक्रमकै अवसरमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारामणी कँडेलले विद्यालयको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विद्यालयका चन्दादाताहरुलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।
विद्यालयले वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसका अवसर पारेर बाह्य कार्यक्रमहरु अन्तर्गत माध्यमिक तह स्तरिय वादविवाद प्रतियोगिता, आधारभूत तह स्तरिय वक्तृत्वकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । आन्तरिक कार्यक्रम तर्फ छात्र÷छात्रा भलिबल, बक्तृत्वकला, यूगल लोक नृत्य, कवड्डी र बेलुन फुटाउने प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । आयोजित प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा प्रथम, द्धितिय र तृतिय हुन सफल विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुलाई उद्धघाटन तथा समापन कार्यक्रम कै अवसरमा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मिनलाल रसाईलीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराई, ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष चित्र बहादुर भण्डारी सहित स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी लगायतको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । शिक्षक विकास गिरीको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन भने शिक्षकहरु बिबराज गैरे र मनोज कुमार रिजालले गर्नुभएको थियो ।